Sambaloolshe oo ka hadlay dhiibistii Qalbi Dhaga | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Sambaloolshe oo ka hadlay dhiibistii Qalbi Dhaga
Sambaloolshe oo ka hadlay dhiibistii Qalbi Dhaga
Taliyihii hore ee Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), C/laahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe), ayaa si aan toos ahayn uga hadlay tallaabadii lagu wareejiyay C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax).
Dowladda Soomaaliya, ayaa daba-yaaqadii bishii August ee sanadkii hore ninkaasi u gacan gelisay Dowladda Itoobiya, taas oo ka careysiisay umadda Soomaaliyeed, dal iyo dibadba.
Sambaloolshe oo wax laga weydiiyay dhiibistii Qalbi Dhagax, ayaa ka war wareegay cidda rasmiga ah ee ninkaasi u dhiibtay Dowladda Itoobiya, balse uu go’aankaasi ahaa mid dowladeed, haddii Golaha Wasiirada Soomaaliya ay war ka soo saareen.
Taliye Sambaloolshe oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay inuusan dooneyn inuu sameeyo far ku fiiqis oo qof uu ku eedeeyo arrintan, wuxuuna tilmaamay in go’aankaas lagaga sareeyay.
Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa u muuqata mid si aan ka fiirsasho lahayn ugu deg degtay wareejintii ay C/kariin (Qalbi Dhagax) ugu gacan gelisay Dowladda Itoobiya, waxa ayna cambaarayn xoog leh kala kulantay shacabka Soomaaliyeed.
Kiiska (Qalbi Dhagax) ayaa noqday mid aanan ka ogeyn quluubta Shacabka Soomaaliyed, kuwaasi oo dareemaya niyad jab wayn oo ku aadan in Dowladda ay arrintan ku deg degtay.